IHE Ị GA-EME MA Ọ BỤRỤ NA ỤDA ADỊGHỊ NA OPERA - OPERA - 2019
Ọ bụrụ na tupu ụda na Intanet abụghị ihe ijuanya, ugbu a, ma eleghị anya, ọ dịghị onye na-eche na ị na-ekiri ihe ọ bụla na-enweghị isi n'ekwughị okwu ma ọ bụ ekweisi. N'otu oge ahụ, enweghị ụda site na ugbu a aghọwo otu n'ime ihe ịrịba ama nke nsogbu nchọgharị. Ka anyị chọpụta ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ụda ahụala na Opera.
Ngwá ngwanrọ na nsogbu usoro
Otú ọ dị, ụda ụda na Opera adịghị apụta nsogbu na ihe nchọgharị ahụ n'onwe ya. Nke mbụ, ọ bara uru ilele opera nke isi ikuku (okwu, ekweisi, wdg.).
Ọzọkwa, nsogbu ahụ nwere ike ịbụ ụda ntutu ụda na sistemụ arụmọrụ Windows.
Ma, ihe ndị a bụ ajụjụ nkịtị gbasara mmepụta ụda na komputa ahụ dum. Anyị ga-atụle n'ụzọ zuru ezu ngwọta maka nsogbu nke ụda nke ụda na Opera nchọgharị na ebe ndị ọzọ na-egwu faịlụ faịlụ na egwu n'ụzọ ziri ezi.
Otu n'ime ihe ndị kachasị mma nke ụda na Opera bụ njedebe na-ezighị ezi site na onye ọrụ na taabụ ahụ. Kama ịgbanwere ọzọ na taabụ, ụfọdụ ndị ọrụ pịa bọtịnụ ogbi na taabụ dị ugbu a. Dị ka ọ dị, mgbe onye ọrụ laghachiri na ya, ọ gaghị achọta ụda n'ebe ahụ. Ọzọkwa, onye ọrụ ahụ nwere ike ụma gbanyụọ ụda, wee chefuo ya.
Ma a na-edozi nsogbu nkịtị a dị nnọọ mfe: ịkwesịrị pịa akara okwu okwu, ma ọ bụrụ na ọ gafere, na ebeabụ enweghị ụda.
Ịgbanwezi igwekota olu
Nsogbu nwere ike ime na ọnwụ nke ụda na Opera nwere ike ịgbanye ya gbasara ihe nchọgharị a na nchịkọta olu Windows. Iji chọpụta nke a, anyị na-eji aka nri pịa akara ngosi ahụ n'ụdị onye ọkà okwu na tray. N'ihe na -eme ihe na-egosi, họta ihe "Open Volume Mixer" ihe.
N'ime ihe nnọchianya nke ngwa ndị onye na-agwakọta "kesaa" ụda ahụ, anyị na-achọ akara ngosi nke Opera. Ọ bụrụ na onye na-ekwu okwu na kọlụm nke Opera nchọgharị gafere, ọ pụtara na ọ dịghị ụda maka usoro a. Pịa akara ngosi okwu ikuku iji mee ka ụda dị na nchọgharị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ụda dị na Opera kwesịrị igwu egwu.
Tupu e nyefe ụda si na saịtị ahụ gaa na ọkà okwu, a na-echekwa ya dịka faịlụ dị na ihe ntanetị. Dị ka ọ dị, ọ bụrụ na cache jupụtara, mgbe ahụ, nsogbu na mmepụta ụda dị mma. Iji zere nsogbu ndị dị otú ahụ, ịkwesịrị ihichapụ oghere. Ka anyị chọpụta otú e si eme ya.
Mepee menu isi, ma pịa "Ntọala". I nwekwara ike ịnyagharịa site na ịpị ọnụ ọgụgụ isi na Alt P keyboard.
Gaa na ngalaba "Nche".
Na igbe ntinye "Nzuzo," pịa bọtịnụ "Kpọtụrụ akụkọ nleta".
Tupu anyị emepee windo windo iji kpochapụ ihe dị iche iche nke Opera. Ọ bụrụ na anyị ahọrọ ha niile, mgbe ahụ, a ga-ehichapụ ihe ọmụma bara uru dị ka paswọọdụ gaa na saịtị, kuki, nleta akụkọ nleta na ozi ndị ọzọ dị mkpa. Ya mere, anyị na-ewepu akara ngosi niile site na mpaghara niile, wee hapụ naanị uru "Foto na faịlụ". Ọ dịkwa mkpa iji jide n'aka na na mpịakọta nke mpio ahụ, n'ụdị na-ahụ maka oge nhichapụ data ahụ, a na-edozi uru "site na mmalite". Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ "Kpechapụ akụkọ nleta nke nleta".
A ga-ekpochapụ cache Nchọgharị. O yikarịrị ka nke a ga-edozi nsogbu ahụ na ụda ụda na Opera.
Ọ bụrụ na ọdịnaya ị na-ege ntị na-eji Adobe Flash Player egwu, mgbe ahụ enwere ike ịkpata nsogbu nsogbu site na enweghị ihe mgbakwunye a, ma ọ bụ site na iji nsụgharị ya. Ịkwesịrị ịwụnye ma ọ bụ melite Flash Player maka Opera.
N'otu oge ahụ, ekwesịrị ịdebe na ọ bụrụ na nsogbu ahụ dị na Flash Player, ọ bụ nanị ụda ndị metụtara njikọ ọkụ ahụ agaghị aga na ihe nchọgharị ahụ, ma ihe ndị ọzọ dịnụ kwesịrị igwu ya n'ụzọ ziri ezi.
Ọ bụrụ na ọ nweghị n'ime nhọrọ ndị a dị nyere aka nyere gị aka, ma ị kwenyesiri ike na ọ bụ na ihe nchọgharị ahụ, ọ bụghị na ngwanrọ ma ọ bụ ngwanrọ nke sistemụ arụmọrụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-ebigharịa Opera.
Dịka anyị mụtara, ihe kpatara enweghị ụda na Opera nwere ike ịdị iche. Ụfọdụ n'ime ha nwere nsogbu nke usoro a dum, ebe ndị ọzọ bụ nanị nchọgharị a.